musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzira Yekuziva Zviri Nyore Kufamba Kwakasimba
Pioneering Travel Sustainable chirongwa chakanyanya kusanganisirwa kune ese marudzi ezvivakwa pasi rose uye inoita kuti kuwana inovimbika ruzivo rwekuchengetedza kuve nyore kune vatengi.
Kufamba Sustainable bheji, inovimbika, inoenderana nepasirese danho rekusimudzira iro rinopa ruzivo rwunoshuvira kune vafambi pasi rese vachitsvaga kuita sarudzo dzakasimba dzekufamba. Yakagadzirwa kuti ishande kune dzakasiyana siyana dzemhando dzezvivakwa, kubva kumafurati, B&Bs uye dzimba dzemazororo kusvika kumahotera, nzvimbo dzekutandarira uye kunyangwe miti yemiti, uye inochinjika kune chaiyo yenzvimbo uye kufunga, danho iri nderekutanga kwerudzi rwayo muindasitiri.
Tichifunga kuti 64% yevafambi vanoti vanoda kugara munzvimbo inochengeteka mugore rinouya uye neanopfuura miriyoni makumi maviri nemasere mazita paBooking.com, kambani inoona mukana unoshamisa wekuratidza mamwe emabasa ane simba ari kutora vamwe vayo kugadzira. zviitiko zvakagadzikana, uye zvakare, zvinoita kuti zvive nyore kune vafambi kuwana nzira yakagadzikana yekugara. Nezvikamu zvitatu kubva muzvina (28%) zvichiratidza kuti vangango sarudza imwe nzvimbo yekugara vachiita maitiro akasimba, inopa mibairo uye inowedzera kukurudzira vanopa kuti vatore matanho anotevera parwendo rwavo rwekusimudzira.
"Kuvaka indasitiri yekufambisa yechokwadi kunotora nguva, kubatana uye kushanda nesimba, asi kufambira mberi kunogoneka kuburikidza nekuenderera mberi hunyanzvi, rutsigiro rweshamwari uye kubatana kweindasitiri," akadaro Marianne Gybels, Director weSustainability paBooking.com. "Tiri kucherechedza kuedza kwekuchengetedza kwehuwandu hwakawanda hwezvivakwa pasi rose nenzira inovimbika uye yakajeka kune vatengi. Kuratidza maitiro avanenge vachiita kunoita kuti zvive nyore kumunhu wese kuita sarudzo ine ruzivo uye ine tariro yakasimba parwendo rwavo runotevera, zvisinei nekwavanoda kuenda. Izvi zvinokurudzira vamwe vatinoshanda navo kutora danho rinotevera rekushanda zvine mwero”.